रोडिज जितेका सुजनको एउटा सपना ! (फोटो र भिडियो सहित) – परिचय डटकम
सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा
साढे ६ करोड राजश्व छली गर्ने विरुद्ध विभागले गर्यो मुद्दा दर्ता
राहत प्याकेज कार्यान्वयन गराउन महासंघले गरायो गभर्नरको ध्यानकर्षण
इसेवा मनि र लिगल रेमिटबीच सम्झौता
रोडिज जितेका सुजनको एउटा सपना ! (फोटो र भिडियो सहित)
By परिचय	 On २७ श्रावण २०७७, मंगलवार १०:२३
सुजन सुवेदी । केही समय अघिसम्म गुमनाम नाम । पोखराको एउटा टोलले मात्र चिन्ने यो नाम अहिले देशभर छाएको छ । उनी देशभर परिचित भएजस्तै रहनसहन पनि बदलिँदैछ । बस चढेर काठमाडौं हानिएका उनी आफ्नै सवारी लिएर घर फर्किए । कारण– हिमालय रोडिज् ।हिमालय टेलिभिजनमार्फत प्रसारित रियालिटी शो ‘हिमालय रोडिज सिजन ३’ मा सुजन सहभागी मात्रै भएनन् । उक्त प्रतियोगिता जितेर घर फर्किए ।
उनको घरमा पुग्दा परिवारसहित छिमेक खुशीले रमाएको थियो । विजयको अवीरले रातै भएका सुजनलाई एकैछिन पहिचान गर्न मुस्किल पर्यो । कडा मेहनत र परिश्रमले पाएको सम्मानमा उनी रमाइरहेका थिए ।
रोडिज जाँदै गर्दा उनको एउटा सपना थियो । रोडिज जितेर बुबाआमाको उपचार गर्ने । आज सुजनको त्यो सपना पूरा भएको छ । तीन दाजुभाइ मध्येका माइला सुजन आमाबाबाको मात्रै नभई लाखौँ नेपालीको मनमा बस्न सफल भएका छन् ।
सुजन सानैदेखिका मिहिनेती हुन् । सानो तपस्याले उनले रोडिज जितेका होइनन् । यसको पछाडि उनको परिवारको साथ र मायाले अर्थ राख्छ । सुरुमा रोडिजको अडिसनमा जाँदा सुजनले बुबाआमालाई केही भनेनन् । दाइलाई मात्र थाहा थियो । पछि एक्कासी छोरालाई टेलिभिजनमा देख्दा बुबाआमा आश्चर्यमा परे ।
छोराले राष्ट्रियस्थरको टेलिभिजनबाट बुबाआमाको नाम लिँदा उनीहरूको आँखामा आँशु थामिन सकेन । सुजनले गरेको मिहिनेत उनीहरूले टेलिभिजनमार्फत हेर्थे । आमाबाबाको मन न हो । छोराले कतै खुट्टा भाँच्ने हो वा उसलाई केही हुने हो भन्ने डर हुन्थ्यो । तर छोराको सफलता पछि बुबाआमामा एक प्रकारको आशा पलाउँथ्यो । सुजन भन्छन्, ‘आज म जहाँ छु आमाबाबाकै मायाले छु । मेरा लागि आमाबाबा नै भगवान हुनुहुन्छ । रोडिजको विजेता भएपछि उहाँहरूको आँखामा देखिएको खुशीको अर्थ मेरा लागि अमूल्य छ ।’
रोडिज अगाडि सुजन पोखराको सीतलदेवी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ‘स्र्पोट टिचर’ को रूपमा आबद्ध थिए । विद्यार्थीलाई शारीरिक व्ययाम गराउनु उनको दैनिक कर्म थियो । आज त्यही कर्मले उनलाई सफलता दिलाएको छ । अनुभव साट्दै भन्छन्,‘रोडिजले मेरो मात्र नभई परिवारको जिन्दगी बदलदिएको छ । पहिले भन्दा धेरै खुशी छौँ हामी ।’
सुजनको परिवारलाई समाजले हेर्ने नजरमा समेत फरकपन आएको छ । हिजो उनको परिवारलाई सामान्य रूपमा हेरिन्थ्यो भने आज सुजनकै कारण प्रशंसा गर्न थालिएको छ । सुजनको परिवार बस्ने टोलमा समेत खुशीको लहर आएको छ ।
सुजनका बुबा रामु सुवेदी वर्कसपमा काम गर्थे । बुबाको पछाडि लाग्दै सुजन पनि वर्कसप पुग्थे । सक्ने काम गर्ने उनको सानैदेखिको बानी थियो । केही समय पछि सुजनका बुबा रोजगारीको शिलशिलामा कतार पुगे । त्यहाँ उनी ८ वर्ष जति बसे । दुःख गरेर छोराहरूलाई हुर्काएका रामु छाती फुलाएर भन्छन्,‘मेरा छोराहरूले कहिल्यै गलत काम गरेनन् । बरू समाजमा शिर उठाएर हिँड्ने बनाएका छन् ।’
सुजनकी आमा पार्वती सुवेदी अस्वस्थ छन् । केही समय उनी उठ्नै नसक्ने गरी थला परिन् । त्यतिबेला उनको सेवा गर्ने माइलो छोरो थियो । जेठो छोरा भारतीय सेनामा भएकाले धेरै जसो समय उतै बिताउनु पथ्र्यो । कान्छो छोरा सानै थियो । पार्वती यसरी थला परेकी थिइन् की उनले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई समेत पहिचान गर्न मुस्किल पथ्र्यो । अहिले उठ्न सक्ने भएकी छिन् । आमाको स्वास्थ्यमा आएको सकरात्मक प्रभावले सुजनलाई बल थपेको छ ।
रोडिज जितेर पुरस्कार स्वरूप पाएको दश लाख रुपैयाँ सुजन बाबाआमाको उपचारका लागि खर्च गर्ने बताउँछन् । भन्छन्,‘बाबाआमालाई पूर्णरूपमा स्वस्थ देख्न चाहन्छु । मेरा लागि पैसा भन्दा पनि बाबाआमाको आर्शिवाद भएपुग्छ ।’
तस्बिर र भिडियो : प्रेम थापा, परिचय नेटवर्क
‘हिमालय रोडिज सिजन ३रोडिज सुजन सुवेदी